तथ्यांकमात्रै रट्ने कि अवसर पनि खोतल्ने ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण तथ्यांकमात्रै रट्ने कि अवसर पनि खोतल्ने ?
सीमित आन्तरिक अवसरलाई रोजगारीको पूर्ण आयाम मान्न सकिँदैन
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षण–२०७५ को प्रतिवेदनले नेपालको श्रमबजारमा सक्रिय जनशक्तिमध्ये ११ दशमलव ४ प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण बेरोजगारको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो । नेपालको अद्यावधिक जनसंख्या २ करोड ९० लाख छ । प्रतिवेदनअनुसार १५ वर्षमाथिको काम गर्ने उमेरसमूहको संख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार छ । तीमध्ये ७९ लाख ९४ हजार जनसंख्या श्रमबजारमा सक्रिय भएको विभागको तथ्यांकमा ११ दशमलव ४ प्रतिशतलाई बेरोजगार मानिएको छ । ७० लाख ८६ हजार जनाले रोजगारी पाएको अध्ययनले देखाएको छ । तर, काम गर्ने उमेरसमूहलाई तुलना गर्दा रोजगारीको क्षेत्रमा रहेको जनसंख्या ३४ दशमलव २ प्रतिशतमात्र हुन्छ । यो तथ्यांक पनि विभागको प्रतिवेदनमै समेटिएको छ । अर्थात्, आर्थिक रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने उमेरको ६५ दशमलव ८ प्रतिशत जनसंख्यालाई अध्ययनले छोएको छैन ।
सीमित आन्तरिक अवसरलाई मात्र रोजगारीको पूर्ण आयाम मान्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनशक्ति पनि बेरोजगारीकै उपज हो । यदि यसो हो भने ९ लाख ८ हजार (११ दशमलव ४ प्रतिशत) मात्र बेरोजगार छन् भन्नु अपूरो बुझाइ ठान्नुपर्छ । बेरोजगारी दरको तथ्यांकीय गोलमाल आफैमा विरोधासपूर्ण छ । भलै, तथ्य संकलनको विधि र तथ्यांकका प्रारम्भिक स्रोतको पारदर्शितामा प्रतिवेदनको विश्वसनीयता निर्धारित हुन्छ । स्रोतबाटै सही जानकारी प्राप्त नहुँदा तथ्यांक कि मिथ्यांक भन्ने द्विविधाका उदाहरणहरूको कमी छैन ।
रोजगारीका तथ्यांकीय तानाबना जेजस्ता भए पनि यसबाट नेपाल अहिले उत्पादनशील जनसंख्याको उर्वर अवस्थामा छ भन्नेचाहिँ पुष्टि भएको छ । श्रम शक्ति सर्वेक्षणकै तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि आर्थिक रूपमा क्रियाशील उमेरसमूहको जनसंख्या ७० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ । यो बालबालिका र वृद्धवृद्धाको संख्या कम भएको अवस्था हो । राष्ट्रिय योजना आयोग र युनिसेफको संयुक्त अध्ययनले नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय (१५ देखि ६४ वर्ष उमेरसमूह) जनसंख्या ६२ दशमलव ६८ प्रतिशतको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।
विश्वका विकसित देशहरूले आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसांख्यिकीको लाभ लिएर विकासको फड्को मारेका छन् । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङ्कङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले यो जनसांख्यिक मौकाको लाभ लिइसकेका छन् । आश्रित जनसंख्या कम हुनु आर्थिक विकासमा तीव्र गतिको अवसर हो । हामीकहाँ भने यो ऊर्जाशील जनसंख्याको उपयोगमा प्रभावकारी सरकारी योजना अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन ।
जनसांख्यिक लाभको समय सधैं रहँदैन । यो एउटा निश्चित अवधिका लागि मात्र हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जनसांख्यिक लाभको समयावधि सन् १९९२ बाट सशुरू भएर ५५ वर्षसम्म रहने अध्ययनले देखाएको छ । अर्थात्, सन् २०४७ पछि नेपालमा आश्रित जनसंख्याको चाप बढ्नेछ । बिडम्वना, यति महत्त्वपूर्ण अवसरको आधा समय खेर गइसकेको छ । यो ऊर्जाशील सम्भाव्यता बोकेको करीब १ तिहाइ जनसङ्ख्या त विदेशमा श्रम बगाइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा बहकिएको छ । कम्तीमा दक्ष जनशक्ति पठाउन सकिएको भए पनि तुलनात्मक लाभ सुरक्षित हुने थियो । बाह्य रोजगारीमा जाने १ प्रतिशतमात्र दक्ष जनशक्ति छ । २५ प्रतिशत अर्धदक्ष कामदार गइरहेका छन् । ७४ प्रतिशत अदक्ष कामदारका रूपमा बाहिरिएको वैदेशिक रोजगार विभागको आँकडा छ ।
सरकार स्वेदशमै रोजगारी सृजनाको नारा धन्काएर श्रम सम्झौताको प्रचारबाजीमा आत्मरति खोजिरहेको भान हुन्छ । प्रविधिको अति उपयोगले रोजगारी खुम्चिँदा विश्व अर्थतन्त्रका दिग्गजहरूले श्रमिकले दक्षता अनुसारको पारिश्रमिक नपाउने पूर्वानुमान गरिरहेका छन् । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयलको अध्ययनले प्रविधिका कारण ४७ प्रतिशित कामको अस्तित्व संकटमा परेको तथ्य पत्ता लगाएको थियो । अमेरिका र यूरोपका अधिकांश देशले यस्ता जोखिम समाधान र मानव संसाधन व्यवस्थापनका चुनौतीको निकासलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाएका छन् । हामी भने प्रविधिले रोजगारीको अवसरमा निम्त्यिाएको जोखिमलाई बेवास्तामात्र गरिरहेका छैनौं, अदक्ष कामदारको पसिनाको भरमा देशको खर्च धान्ने ध्याउन्नमा छौं ।
जनसांख्यिक अवसरको उपयोग र प्रविधिको दोहनका निम्ति मानव पूँजी निर्माणमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । आजको विश्वले दिगो विकासका निम्ति मानवीय पूँजी निर्माणलाई लक्ष्यको औजार मानेको छ । बालबालिका र महिलाको पोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी दक्ष जनशक्तिको आधार हो । दिगो विकास र यसका अवसरहरूको समावेशी उपयोगको एजेन्डामा लागिपरेका बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूले मानव पूँजी निर्माणलाई विकासको मुख्य औजारका रूपमा अघि सारेका छन् । विश्व बैंकले दक्ष मानव संसाधन निर्माणका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानीलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने एजेन्डा अघि बढाएको छ । ग्लोबल फाइनान्सिङ फेसिलिटीले यस्तो योजनामा गतवर्ष १ विलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक सहायता घोषणा गरेको थियो । नेपालले विकासको यो लयलाई समात्ने हो भने मानवीय पूँजीका आधारमा लगानी बढाउन आवश्यक किन पनि छ भने अबको २८ वर्षपछि नेपालको जनसांख्यिक अवसर ओरालो गतितिर उन्मुख हुने अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । विकासको अवसरलाई समात्न जनसंख्यालाई विकासको मुख्य पूँजीका रूपमा स्थापित नगरी हुँदैन ।
मानिसको जीवनको पहिलो २४ महीनामा पोषण र स्वास्थ्यमा गरिएको १ अमेरिकी डलरबराबरको लगानीले १८ अमेरिकी डलर बराबरको प्रतिफल दिने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । आमा र बच्चाको पोषण र शिक्षालाई मानव पूँजी निर्माणको पूर्वाधार मानिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा पनि नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ र स्वास्थ्यमा पहुँचको हकको प्रावधान राखिएको छ । तर, जल सम्पदामा धनी देशका १५ प्रतिशत जनताले मात्रै स्वच्छ र सुरक्षित पिउने पानीमा पहुँच पाएको सरकारी तथ्यांकले हिमालको पानी निकासी गर्ने सरकारकै योजनालाई गिज्याइराखेको भान हुन्छ । विद्यालयमा बित्ने एउटा थप वर्षले आयमा कम्तीमा ८ देखि १० प्रतिशत वृद्धि भएको दाताका अध्ययनहरूले देखाएका छन् । हाम्रो तथ्यांकीय धरातल फरक छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७४÷७५ मा कक्षा १ मा ९५ दशमलव ९ प्रतिशत बालबालिका भर्ना भएकोमा १० कक्षासम्म पुग्दा यो ५७ दशमलव १ प्रतिशतमा झरिसक्ने उल्लेख छ । सरकारी तथ्यांकमा १२ कक्षासम्मको अध्यन पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्या १७ दशमलव २ प्रतिशतमात्र छ ।
विश्व बैंकको एक अर्को अध्ययनले विश्वका आधाभन्दा बढी मानिसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएको औंल्याएको छ । बाल्यकालमा पोषण नपाएका २५ प्रतिशत युवा पूर्णरूपमा स्वस्थ्य रहन सक्दैनन् । प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य उपचारको खर्चका कारण वर्षेनि विश्वका १० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि पुग्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नागरिकलाई आर्थिक समस्याविना स्वास्थ्य सेवा पाउने प्रावधान पारित गरेको छ । तर, विश्वमा यस्ता देश पनि छन्, ती देशले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा न्यूनतम आवश्यकताको १ तिहाइ रकम पनि खर्च गर्दैनन् । नेपाल यस्तै देशको अग्रसूचीमा पर्छ । हाम्रो संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था गरेको छ । झाडापखालाको औषधि समयमा नपाएर र स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने आर्थिक सामथ्र्यको अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने पीडा पनि नेपालीहरूकै छ ।
मानव पूँजी निर्माणका आधारभूत आधार शिक्षा, स्वास्थ्य, गुणस्तरीय विद्युत्, पिउने पानी, सरसफाइजस्ता आवश्यकताको पूर्तिमा विगत ५ वर्षयता राज्यको लगानी अपेक्षित हुन सकेको छैन । रकमको आकार बढेको देखिए पनि वार्षिक बजेटको तुलनामा परिमाणको अनुपात निरन्तर ओरालो लागिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारी निकायका तथ्यांकीय फेहरिस्त बहस र विवादका विषय हुन सक्छन् । तर, नेपालको जनसांख्यिक सामथ्र्य भने आर्थिक विकासको निर्विवाद औजार बन्न सक्छ । अभाव प्रतिबद्धता र योजनाको मात्र हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण : ५९ हजार युवा बेरोजगार
अभियान जनमत : सरकारी तथ्यांक जनताले पत्याएनन्
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण : चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ६.८१ प्रतिशत